सुदूरपश्चिमकी दुलही टिकटकमा भाइरल, को हुन् त उनी ? – Yug Aahwan Daily
सुदूरपश्चिमकी दुलही टिकटकमा भाइरल, को हुन् त उनी ?
युग संवाददाता । ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ११:५८ मा प्रकाशित
धनगढी, ३० मंसिर ।
उनले कक्षा ६ देखि १२ सम्मको अध्ययन धनगढीको ऐश्वर्य विद्या निकेतनमा गरेकी हन् भने स्नातक तह दोस्रो वर्षसम्म ऐश्वर्य क्याम्पसमा अध्ययन गरेकी उनी हाल काठमाडौँमा अध्ययनरत छन्। उनी मुडभरी शान्तिको नामबाट टिकटक चलाउँदै आएकी छन्।